I-iPhone 13 ingabandakanya i-ID yobuso ehambelana neemaski | IPhone iindaba
Iindaba ezibalulekileyo ezithi zisandul 'ukupapashwa nguJon Prosser ukuqinisekisa oko I-iPhone 13 elandelayo inokubandakanya inkqubo yesazisi sobuso esebenza nokuba imaski ivuliwe.
Ukusukela oko kwafika i-COVID-19, i-iPhone kuye kwafuneka ibone ukuba inkqubo yayo eyaziwayo yobuso ihlala iyinkqubo engenamsebenzi mihla le ngenxa yokusetyenziswa kweemaski. Ngesiqingatha sobuso obugqunywe, iskena sobuso se-iPhone asikwazi ukubona umsebenzisi, kwaye ngaphandle kwento yokuba ngoku sinokuyivula i-iPhone sisebenzisa i-ID yobuso kunye neApple Watch yethu xa le nkqubo ifumanisa ukuba sinxibe imaski, le nkqubo ayisasebenzi kakuhle, iyakhawuleza okanye ikhuselekile njengoko yayikhulelwe ekuqaleni. Ngapha koko, iApple ayivumeli le ndlela intsha yokuvula ukuba ibhatale ngeApple Pay.
Kuko konke oku, kuninzi okutshiwo malunga nokubandakanywa kwesazisi esitsha sokudibanisa esidityaniswe kwiscreen, esidityaniswe ne-ID yobuso esivumela ukuba sisebenzise nokuba yeyiphi na kwezi ndlela zimbini ngokungafaniyo ngokuxhomekeke kwiimfuno zomzuzu ngamnye. Kodwa kuthekani ukuba iApple iphuhlise i-ID entsha yobuso esebenza nokuba imask ivuliwe? Ewe, le yile ibonakala ngathi iyenzeka ekugqibeleni ukuba siqwalasele le nto ipapashwe nguJon Prosser blog. Umfanekiso esiwubonayo ekuqaleni kwenqaku ibonisa le ID entsha yobuso ngaphakathi kwesakhelo esibekwe ecaleni kwe-iPhone 12, nge-Apple ebeya kuvavanya ngayo le nkqubo intsha ngaphakathi. Ukucwangciswa kwamacandelo ayo kunye nemilo yeseti iyafana ncam ne-ID yobuso emxinwa ethi i-iPhone 13 entsha ihletyelwe.Le inokuba yenye yeencwadana ezinkulu ze-iPhone elandelayo esiza kuyibona kwisibini iiveki kwaye zinokuthengiswa nge-17 kaSeptemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 13 » I-iPhone 13 ingabandakanya i-ID yobuso ehambelana neemaski
Ifilimu ye-Apple TV + "Intlekele yaseMacbeth" yokuvala i-65th BFI London Film Festival